Mhlawumbi kufuneka ukuba uninzi lwemali isethi epheleleyo yokucoca
Isetyenzisi sezinto zokucoca ezicoca mhlawumbi zininzi zemali? Iingxaki ezibandakanyekayo kuzo zonke iinkalo zokucoceka ezomileyo zokukhetha nokuthenga. Ukuba abatyali-mali abanakho amava, baziva bekunzima ukuphendula. Amagama ambalwa athi, ngokukhawuleza vumela amava ENEJEAN ahlambulule, umcebisi-mali oyintloko malunga neempendulo zakho.
Isixhobo sokucoceka esomileyo mhlawumbi singaphi imali, kubaluleke kangakanani ukuba uvule ukuhlamba impahla? Okokuqala, ngokulingana nobungakanani bamatshini abacocekileyo. Ubungakanani bamatshini ahlambulukileyo, mfuneko enkulu yokwenza izinto zokucoca ezomileyo, ngakumbi intengo yesethi yokucoca imveliso yendalo. Ukuba ngaba i-cleaners enkulu ebomileyo, kufuneka bathenge isethi yempahla enkulu yokucoca iomile, kunye nokunye.
Ngaphandle kokuvula iincinci ezincinci ezihlambulukileyo, i-washer eyomileyo, i-dryer, i-generator ye-steam, umatshini wokucoca kunye nezinye izixhobo ezisisiseko kubalulekile. Kwaye iincinci ezincinci ezicoca ngenxa yokukhuphisana zibuthathaka, ukwenzela ukufumana uphuhliso lwexesha elide, kodwa ezinye zifuna ukuba zixhobo zokucoceka eziphezulu zomgangatho ophezulu. Ngaloo ndlela, kuyinto engokwemvelo yokuhlamba ixabiso lempahla yokucoca.
Ukuze sikhusele ukukhwabanisa, thina ekukhethweni nasekuthengeni izixhobo, bhetele ukhethe umgangatho oqinisekileyo owenziwe ngemveliso yokucoca. Ewe, umgangatho ophezulu, idumela elihle, ubuchwepheshe obuqilileyo bokusetyenziswa kwezinto ezinkulu zokucoca, izinto zihlala ziphakamileyo. Ziziphi izinto eziphambili zeendlela zombini? Ewe, oko kukuthenga i-ENEJEAN imveliso yokucoca.
Ngoku ujoyine i-ENEJEAN yokuhlamba ngenxa ye-brand jiamingfei kunye nomgama ophezulu ukusuka kwinqanaba elikhulu, nokuba ngaba uyingama-mawaka e-yuan i-RMB, unokukwazi ukuthenga uluhlu lwekhwalithi ephakamileyo kunye nexabiso elincinci lempahla yokucoca. Kwinqanaba elincinane le-ENEJEAN yokuhlamba, i-RMB engaphantsi kwe-30000 ye-Yuan RMB, equka i-equiper yokucoca i-dryer ingakwazi ukuhlangabezana nemfuno yesitolo sakho.
Ukongeza kwizinto ezincinci zokucoca, i-ENEJEAN yokuhlamba kunye ne-tetrachlorethylene ecocekileyo i-cleaners, iingubo zokuhambisa iingubo, i-luxury-door door-disinfection cabinet, i-blank-cloth function-cloth to stains, njengomshini oshisayo kunye nezinye izixhobo zokusebenza zokucoca, Ixabiso libuye lihluke kumawaka amawaka e-RMB ukuya kuma-RMB amashumi, unokukhetha ngokwamandla abo oqoqosho.
Inqaku lokugqibela: Uhlalutyo lwenzuzo yefestile y...
Inqaku elilandelayo: Umatshini wokucoca oomileyo un...